komishiniin Poolisii magaalaa Finfinnee ayyaanni bara haaraa nagaan akka kabajamuuf qophiidha jedhe – Fana Broadcasting Corporate
komishiniin Poolisii magaalaa Finfinnee ayyaanni bara haaraa nagaan akka kabajamuuf qophiidha jedhe
Finfinnee, Qaammee 6, 2011 (FBC) – Komishiniin Poolisii magaalaa Finfinnee ayyaanni bara haaraa nagaan akka kabajamuuf qophii barbaachisu xumuruun gara hojiitti seenu beeksiseera.
Hawaasni tumsa hojii nageenyaa cimsee akka itti fufu komishinichi waamicha dhiyeesseera.
Barri haaraan 2012 haalaa gaariin akka kabajamuuf komishinichi yakkaa fi balaa tiraafikaa ittisuuf xiyyeeffanno adda kenninee humna qabu hunda bobaasuun qaama nageenyaa biro waliin qindoominaan gara hojiitti galuu beeksisisseera.
Komishiniin Poolisii Magaalaa Finfinnee Komishinaar Geetuu Argaw akka ibsanitti waktii ayyaanaa sochiin namaa fi konkolaataa waan dabaluuf naannoo gabaa fi bashananoota adda addaatti yakkoonni fi balaan tiraafikaa akka hin uumamneef komishinichi xiyyeeffannoo kennee ni hojjeta jedhaniiru.
hawaasni tajaajila poolisii argachuufis ta’e dhimmoota shakkii qabaan yoo isaan mudate bilbila tolaa 991 fi 816 yookiin 011-1-11-01-11 eeruu kennuu akka danda’amu komishinichi beeksiseera.